Wacaay daray ah: Dagaal gordhawayd kadhacay Jiida horre ee Tukaraq – Radio Daljir
Nofeembar 4, 2018 9:27 g 0
Wararka deg deg ah ee Radio daljir kaso gaaray Jiida horre ee Tukaraq ayaa sheegaya in gordhawyd dagaal saacado socday uu dhexmaray Ciidamadda Puntland iyo kuwa Somaliland ee isku horfadhiya Jiida horre ee Tukaraq.
khasaare dhimasho iyo dhaawac waa jiraan balse lama ogaan karro tiradda khasaaraha inkasto xili dambe ay tahay,haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya in xaladdu ay tahay mid addag.
Radio daljir waxay u shegeen goobjoogayal in Ciidamadda Difaaca ee Puntland ay Weraar ku qaadeen Ciidamo ku sugnaa fariisimo ay leeyihin Somaliland halkaasna uu kadhashay iskorimaad khasaare dhaliyeey.
Ciidamadda Puntland iyo Somaliland ayaa wali isku horfadhiya Tukaraq lamana ogaan karro xiligan khasaaraha dhabta ah ee jirra,balse Wararkeena subaxnimo ayaan idiin kusoo gudbinaynaa insha allah.
Khudbad Dhinacyo badan taabanaysa oo uu Gaalkacyo ka jeediyeey Musharax Cali Xaaji (Daawo)